BREAKING NEWS: Qaramada midoobey oo ka digtey cabsi horleh oo ku soo wajahan dalal Somalia kujirto.
January 12, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Nairobi)-Hay’adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobey ee FAO ayaa waxa ay digniin culus ka soo saartay AYAX horleh oo ku soo wajahay wadamada Kenya, Itoobiya iyo xitaa qaybo kamid ah dalka Soomaaliya.
Ha’yadda waxay sheegtay in ayaxa uu kasoo duulayo goobihii uu horraan sida ba’an u saameeyay ee bariga Itoobiya iyo bartamaha Soomaaliya isla markaana haatan uu ku baahayo gobolka shucuubta koonfureed ee Itoobiya iyo waqooyiga iyo deegaanada dhaca xeebaha Kenya.
Dhanka kalena, hay’adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa waxa ay ka digtay in bishan uu ayaxa gaari karo karo gudaha Kenya ilaa Tanzania, South Sudan, Uganda iyo qaybo horleh oo kamid ah Koonfurta, Bartamaha iyo Bariga Soomaaliya.
Sannadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii uu ayaxa ku habsaday deegaanno dhowr ah oo ka tirsan Soomaaliya, wuxuuna baabi’iyay dhul beereed ku yaalla halkaas, waxaana meelaha uu aadka u saameeyey kamid ah Puntland oo dhacda Bariga Soomaaliya.